I-China I-BICYCLES E-China ZOBUGQIBELELO BUKHUSELEKILE. NDINGAYE NDIBHENZE IBHODI? Imveliso kunye neMveliso | Luhamba
IIBHICO ZONYULO ZOKUHLAZIYA NGOKUKHANYA. NDINGAYE NDIBHENZE IBHODI?
Kutshanje, umsebenzisi wesithuthi sombane uphakamise lo mbuzo: Ibhayisekile yombane endisandula ukuyithenga iyacotha. Ndingayongeza ibhetri ukuze ikhawuleze? Okwalo mbuzo, impendulo yeqela lenkampani ye-motorow-Tech emva kokuba kuthengisiwe kukuba akunakwenzeka ukongeza iibhetri ngezizathu ezine eziphambili.
Okokuqala, umda webhokisi yebhetri, awunakongeza iibhetri ezintsha
Wonke umntu uyazi ukuba iibhetri zenziwe ngononophelo ngaphambi kokuba bemke kumzi-mveliso, kubandakanya ubungakanani bebhokisi yebhetri. Kuphela kuxa ibhetri yenziwe apho akuyi kubakho kuvuza ngenxa yokuqhaqha. Ukuthatha ibhayisekile yombane eyi-48V njengomzekelo, idityaniswa ziibhetri ezincinci ezili-12V, kunye nebhokisi yebhetri enakho kwaye enokugcina iibhetri ezincinci ezi-4. Akunakwenzeka ukongeza iibhetri ezintsha.
Okwesibini, umgangatho kazwelonke omtsha wezithuthi zombane uthintelwe, kwaye iibhayisekile zombane ezineebhetri ezintsha ezongezwe zodwa azinakuba sendleleni.
Kumgangatho omtsha welizwe, ibhetri yombane ngeebhayisikile zombane ayinakodlula i-48V. Ukuba abasebenzisi bafuna ukongeza iibhetri ezintsha, ngokucacileyo abahlangabezani nomgangatho omtsha kazwelonke, kwaye ezo moto zombane ziya kudweliswa njengezithuthi ezingekho mgangathweni. Nokuba umsebenzisi ufumana ilayisenisi, inqwelo yombane enjalo ayinakonwabela ilungelo lendlela, olo kuguquko olungekho mthethweni. Mhlawumbi abantu abaninzi bafuna ukuthi, ngaba ungaluchaza olu hlobo lwemoto njenge moto yombane? Impendulo nguhayi. Ke ngoko, kule ndawo, iibhayisikile zombane azinakubekwa bhetri.
Okwesithathu, izinga lokungaphumeleli kweebhayisikile zombane ngaphandle kweebhetri liphezulu
Kwithiyori, iibhayisekile zombane zihamba kancinci, kwaye ukongeza ibhetri kunokubenza bakhawuleze. Nangona kunjalo, kwindawo ebonakalayo, ukongeza ibhetri kunokwenzeka ukutshisa imoto okanye isilawuli, okwenza izinga lokuhluleka kweebhayisikile zombane liphezulu. Oku kuthetha ukuba ukuba ibhetri iya kongezwa, i-motor kunye isilawuli kufuneka zitshintshwe kwaye zilingane. Ukusuka kule ndawo yokujonga, ukungalunganga kokudibanisa ibhetri kungaphezulu kunezibonelelo, kwaye indleko iphezulu, ngenxa yoko awunakongeza ibhetri.
Ezine, iibhayisikile zombane ezongeziweyo ngaphandle kwemvume zineengozi ezinkulu zokhuseleko
Kuboniswa ikakhulu kwiinkalo ezimbini. Okokuqala, iibhayisiki zombane ezineebhetri ezongezelelwe ngasese zinokuzinza okubi ngakumbi kunye nomngcipheko omkhulu. Okwesibini, iibhayisekile zombane ezineebhetri ezongeziweyo azikho kubungakanani besiqinisekiso somenzi ezintathu. Ukuba kukho iingxaki ngezithuthi zombane, zinokusonjululwa kuphela ngendleko zazo. Ke ngoko, iibhayisikile zombane zihamba kancinci, kwaye ukongeza ibhetri akunakusebenza.
Ngamafutshane, Ukuphuhlisa iimveliso zobuchwephesha bendalo obuhlala zihlala ziindawo eziphambili ekugxilwe kuzo kwinkampani yePowerow-Tech. Yila ngakumbi uyilo, ukuvelisa kunye nentengiso yesikhuphelo sombane, i-e-bhayisekile, iiseyboard kunye nee-skateboards. Ukusuka kula manqaku mane, iibhayisikile zombane kwanesantya Slow, azinakongeza iibhetri. Ngapha koko, abasebenzisi akufuneki bonyuse isantya ngokongeza iibhetri. Ngokusekwe kwimeko yentengiso yangoku, izithuthuthu zombane kunye nezithuthuthu zombane zinokusetyenziswa endleleni.